ဘောလုံးပရိသတ်တွေအဘို့, ဘောလုံးသမားများ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိအကြောင်းကိုဖတ်ရှုခြင်းမကြာခဏသြဇာလွှမ်းမိုးလှုံ့ဆော်နှင့်အားပေးမှုသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘောလုံးမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိဖြစ်ရပ်မှန်တည်ရှိဘာဖြစ်လို့ဤသူကားအ !!
ကျွန်တော်မျိုးသုဉ်းသို့သွားဘယ်တော့မှစေခြင်းငှါ, ငါသိ၏အဖြစ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ။ ဂိမ်းကစားသောအတူထုံးစံနှစ်ပေါင်းများစွာပြောင်းလဲထားပြီးသော်လည်း, က generate မှတာတွေရပ်စဲဘယ်တော့မှသောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ပုံပြင်များသားစဉ်မြေးဆက်များအတွက်ဘောလုံးသူတွေဟာ၏အမှတ်တရများအတွက်ပြုတတ်ကြ၏လိမ့်မယ်။
အများအားဖြင့်ကစားသမားများ, မန်နေဂျာများနှင့်အားကစား၏အထက်တန်းလွှာန်းကျင် revolve သောပုံပြင်များ, ဆုတ်ထားတာထိ, mindblowing နှင့်သင်တန်း၏, စာဖတ်သူတွေ, နားထောင်နှင့်ကြည့်ရှုထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အပျက်များကသူတို့စိတ်ထဲမှာတည်ထောင်ရန်သော evocative ခံစားချက်များကိုဖော်ပြရန်တက် conjure နိုငျကွောငျးမဆိုအပြုသဘောနာမဝိသေသနနေကြသည်။
Lifebogger ဘောလုံးကစားသမားများ, မန်နေဂျာနဲ့အထက်တန်းလွှာနှင့် ပတ်သက်. ဆုတ်ထားတာပုံပြင်များတွေ့ရမယ်။ Image ကို Credit: LB.
ပုံပြင်များကိုသူတို့နှင့်တူပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပလက်ဖောင်းများ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုအတိတ်ချော်ကြဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုအတွက်မုသာစကားကို evocative စေသည်အရေးပါသောအချက်တစ်ချက် Lifebogger အရာဘောလုံးဗဟိုပြုအတ္ထုပ္ပတ္တိများရေးသားခြင်း၏စာပေနှင့်မြင့်မြတ်သောအနုပညာအတွက် majors ။
At Lifebogger, ကျွန်ုပ်တို့သည်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ဘောလုံး geniuses မန်နေဂျာများနှင့်အထက်တန်းလွှာနှင့် ပတ်သက်. တင်ပြစိတ်ဝင်စားစရာအတ္ထုပ္ပတ္တိများ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သောစစ်မှန်သောနှင့်မရေမတွက်ဘောလုံးပုံပြင်များ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒစ်ဂျစ်တယ်အရင်းအမြစ်အဖြစ်ကိုယျ့ကိုယျကိုဂုဏ်ယူ။
Lifebogger စစ်မှန်တဲ့ဘောလုံးပုံပြင်များတစ်တစ်နေရာတည်းမှာဒစ်ဂျစ်တယ်အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ Image ကို Credit: LB.
အကျဉ်းနည်း, ဤဆောင်းပါးကိုကောင်းသော-ဖတ်၏ Make ရှိသည်သောခေါင်းစဉ်အောက်တွင်ဘောလုံးသမားများ, မန်နေဂျာများနှင့်အထက်တန်းလွှာများမရေမတွက်သို့မဟုတ်ပြောင်-လူသိများအတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်များတင်ပြခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်ကိုကျွန်တော်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုတစ်ဦးပြည့်စုံစိတ်ကူးပေးဖို့ရည်ရွယ်သည်။
အဘယ်ကြောင့်ကလေးဘဝပုံပြင် - ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံး Play မဟုတ်သူကားအဘယ်သူဘောလုံးမန်နေဂျာများ
ဘောလုံးလူကြိုက်များယုံကြည်ချက်တွေနဲ့အယူအဆတွေမှခြွင်းချက်ထဲကပေါက်မှမတည်ရှိခဲ့ပါဘူး။ ပိုဆိုးမှာ - - ဒီလိုအယူအဆတွေတစ်ခုမှာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးကစားဘယ်တော့မှသူကိုတစ်ဦးချင်းစီကိုမနိုင်ကြောင်း posits ဘောလုံးမန်နေဂျာဖြစ်လာသို့မဟုတ် - မှာအကောင်းဆုံး - စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်အတွက်ကောင်းစွာခ။
အဆိုပါဖျောပွယုံကြည်ချက်ထင်ရသောထူထောင်သိပ္ပံနည်းကျအချက်အလက်များဖြစ်လာခဲ့ကြသည်သကဲ့သို့ Maurizio Sarri အနိမ့်လိဂ်ကလပ် AC အ Sansovino စဉ်နှင့်အတူ 1990s ၌သူ၏နည်းပြအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ရန်ဘလူးထဲကပေါ်ထွက်လာ Andre Villas-Boas 1990 ရဲ့နှောင်းပိုင်းအတွက်ပေါ်တိုမှာလက်ထောက်နည်းပြအဖြစ်စတင်ခဲ့ပါတယ်။
သူတို့နည်းပြအလုပ်ကိုစတင်မတိုင်မီ Andre Villas-Boas နှင့် Maurizio Sarri တဲ့ professional အဆင့်မှာဘောလုံးမကစားခဲ့ပါဘူး။ Image ကို Credit: WAGNH ။
အဘယ်ကြောင့်မရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - မန်နေဂျာများနှင့်အတူရန်ငြိုးထားခြင်းခဲ့သူကားအဘယ်သူဘောလုံးကစားသမား
ရန်ငြိုးထားခြင်းအဖွဲ့သည်အားကစားအတွက်ကစားသမားလုပ်ရပ်တွေကို "ယခုအချိန်တွင်၏အပူ" ကလွှမ်းမိုးထားရာအထူးသဖြင့်ဘောလုံးနီးပါးမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ကြသည်။ ဘောလုံး geniuses ၎င်းတို့၏မန်နေဂျာမှအပူကိုယူတဲ့အခါမှာကစားသမားဟာသူတို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဆန့်ကျင်ပြပွဲနည်းဗျူဟာ "ပရော်ဖက်ရှင်နယ်များ၏ကျင့်", တူညီတဲ့အဖြစ်ပယ်ချသောရံဖန်ရံခါ faceoffs သို့မဟုတ်ပြင်းထန်တဲ့အမူအကျင့်ကဆိုပါတယ်မရနိုင်နေစဉ်။
ဘာစီလိုနာပရိသတ်များကလပ်ရဲ့မန်နေဂျာဟောင်းအကြားရှည်လျားရန်ငြိုးထားခြင်းကိုမေ့လျော့အမြန်ဖြစ်မဟုတ်ဘူး ဂွာဒီယိုလာ နှင့် Forward Zlatan Ibrahimovich ဂွာဒီယိုလာသာ6လအတွင်းနှစ်ကြိမ်သူ့ကိုနှုတ်ဆက်သောအဆုံးစွန်သောနေရသည်နှင့်အတူ။ တစ်ဦးထက်ပိုရှုပ်ထွေးရန်ငြိုးထားခြင်းခုနှစ်, Real Madrid အသင်း၏ပရိသတ်များ supporting အကြားကွဲပြတ်လျက်ရှိ၏ ဂိုးသမား Iker Casillas or ဟိုဆေးမော်ရင်ဟို အခါနှစ်လုံးကိုနည်းပြစပိန်ဂိုးသမားတစ်ဦးသစ္စာဖောက်ဖြစ်ရိပ်မိသောအရာကိုကျော်တစ်ဦးထပ်မံကျရှိခဲ့သညျ။
Zlatan Ibrahimovich နှင့်ဂိုးသမား Iker Casillas နှစ်ဦးစလုံးဟာသူတို့ရဲ့တဦးတည်းအချိန်မန်နေဂျာနှင့်အတူရှည်လျားခါးသီးရန်ငြိုးထားခြင်းရှိခဲ့ပါပြီ။ Image ကို Credit: LB.
ထို့ပြင်များစွာသောမဟုတ်ကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့ ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းရဲ့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာ overbearing သဘောထားကိုတစ်ချိန်ကထို့နောက်နည်းပြဦးဆောင် အဲလက်စ် Furgeson ယင်းစူပါစတားတစ်ဦး Boot တက် Kick ရန်။ အဆိုပါဖိနပ်အတိအကျ, မျက်နှာပေါ်မှာ 2003 အတွက် Real Madrid အသင်းအားမိမိနောက်ဆုံးပြောင်းရွှေ့ catalyzed တစ်ခုအဖြစ်အပျက်ဘက်ခမ်းကိုနှိပ်ပါ။
အဘယ်ကြောင့်မရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - အဆိုပါအများစုမှာနီကဒ်များနှင့်အတူဘောလုံးကစားသမား
ခက်ကွင်းလယ်ဘက်တော်သားအဖြစ်နည်းနည်းလေးဒေါသမှာအကြမ်းဖက်မှုနှင့်ပြပွဲကျူးကျော်ဆီသို့ဦးတည်နေတဲ့ propensity ရှိသည်သောကြော့ကစားသမားမှကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖြေရှင်းရန်ထံမှဤအမြိုးအစားအကွာအဝေးအတွင်းတရားခံ။ ရလဒ်အနေနဲ့သူတို့အနီကဒ်နွှယ်နေတယ်လို့အားဖြင့်အသိအမှတ်ပြုဖြစ်ကြောင်းအံ့ဩစည်းကမ်းမှတ်တမ်းများရှိသည်။
ခက်ခဲဖြေရှင်းရန်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နှင့်အတူစတင်နိုင်ရန်, Sergio Ramos သူအများဆုံးပေးပို့-off လာလီဂါသမိုင်းအတွက်ပိုင်ဆိုင်အဖြစ်ဇယားထိပ်ဆုံးမှ။ အငြိမ်းစားသော်လည်း, စတီဗင် Gerrad အစောပိုင်းဗတ်များအတွက် Anfield ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကိုဆင်းလမ်းလျှောက်သူအများဆုံးအနီရောင်-card ကိုကွင်းလယ်အကြားအဆင့်။
စတီဗင်ဂျရတ်နှင့် Sergio Ramos အများစု၏စာရင်းထဲတွင်အဆင့်မြင့်အဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ကစားသမားကိုချွတ်ပေးပို့ပါ။ Image ကို Credit: LB.
ကျနော်တို့ရှေ့ပြေးရှိသည်ဟု Moving ဒီယေဂိုကော်စတာ အဘယ်သူ၏ရန်လိုစတိုင်ကစားနေရာတိုင်းကသူတတ်ဒိုင်လူကြီးတွေနဲ့ဒုက္ခသူ့ကိုဆင်းသက်ဖို့တာတွေရပ်စဲဘူး။ တကယ်တော့သူကကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းမှအပိုင်ပြန်လည်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်အခါတိုင်းဖြစ်ပျက်ဖို့စောင့်ဆိုင်းနေမတော်တဆမှုအဖြစ်ကိုရိပ်မိသည်။
အဘယ်ကြောင့်မရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - တတ်တဲ့ Are အဘယ်သူသည်ဘောလုံးကစားသမား
ကွာလှပသောဂိမ်း၏အနုပညာကျွမ်းကျင်ဖို့လေ့ကျင့်ရေးအတွက်အများကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံထံမှအချို့ကစားသမားများဟာသူတို့ရဲ့အိမ်ရှင်ကလပ်အသိုင်းအဝိုင်း၏ဘာသာစကားကိုသင်ယူနေဖြင့်ပရိသတ်တွေနှစ်သက်အပိုမိုင်ဝင်ကြပြီ။ အဆိုပါကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဘောလုံး geniuses ပိုကောင်းသူတို့ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းမှာ acculturate လုပ်ပေမယ့်အနားယူအပေါ်သို့အုပ်ချုပ်ရေးအခန်းကဏ္ဍများအတွက်အကြိုက်ဆုံးအဖြစ်သူတို့ကိုနေရာချထားခဲ့ပါသည်သာ။
အများကြီး ado ခြင်းမရှိဘဲ, ဤမျှလောက်များစွာသောဘာသာစကားများကိုသိသောကစားသမားဂိုးသမားတို့ပါဝင်သည် ပတေရုသကရရှိသွား အဘယ်သူသည်သူ၏ဇာတိခကျြ, စပိနျဂျာမန်, ပြင်သစ်နှင့်အင်္ဂလိပ်ပြောတတ် asides ။ မိမိအစိတျအပိုငျးတွင်, Henrikh Mkhitaryan ကြှမျးကငျြစှာဘာသာစကား Armenian, ပျေါတူဂီ, ပြင်သစ်, အီတလီ, ရုရှား, အင်္ဂလိပ်နဲ့ဂျာမန်ပြော၏။
နောက်ဆုံးဒါပေမယ့်ကျိန်းသေဘဲအနည်းဆုံးဖြစ်ပါသည် ရိုမီလူလူကာကူ သူမူကား 8 ဘာသာစကားများထက်မနည်းပါးလာပြောတတ်အဖြစ် "hyperpolyglot ၏စုံလဂျဖြစ်သထေူ၏။ သူတို့ဟာပြင်သစ်, Lingala-, ဒတျချြ, ဘယ်လ်ဂျီယံ, ကွန်ဂို, ဆွာဟီလီ, စပိနျ, အင်္ဂလိပ်, ပေါ်တူဂီနှင့်ဂျာမန်တို့ပါဝင်သည်။
ရိုမီလူလူကာကူ, Henrikh Mkhitaryan နှင့်ပေတရုကရရှိသွားဘောလုံးကွင်းထဲမှာအထင်ကြီးတတ်တဲ့ဖြစ်ကြသည်။ Image ကို Credit: LB.
အဘယ်ကြောင့်မရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - အဆင့်မြင့်ပညာရေးဘွဲ့ Acquired အဘယ်သူသည်ဘောလုံးကစားသမားများနှင့်မန်နေဂျာများ
တချို့ဘောလုံး geniuses ကတွက်ဆလမ်းဘောလုံးကွင်းထဲမှာတက်ကြွစွာပါဝင်မှုအလွန်ကြီးစွာသောပညာသင်နှစ်အထွဋ်၏ဆည်း, သူတို့အစီအစဉ်များပြီးဆုံးအပေါ်ကောလိပ်ဒီဂရီနှင့်ဘွဲ့ရဘို့စာရင်းသွင်းဖို့သွားမြင်သောတစ်ဦးတန်ဖိုးရှိရှိအတွေးအခေါ်တားစီးမထားဘူး။
အီတလီကစားသမား Giorgio Chiellini Business Administration အတွက်မာစတာဘွဲ့နှင့်အတူတူရင်တက္ကသိုလ်ကနေဘွဲ့ရများအတွက်စာရင်းထိပ်ဆုံးမှ။ ဘို့ Mata ကိုနှစ်ခုဒီဂရီရှိခြင်း - စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်တဦးတည်းနှင့်အားကစားသိပ္ပံများတွင်အခြား - မယ့်အလုံအလောက်မဟုတ်ပါဘူး။ သူကစာအရေးအသား၏အချိန်မှာစိတ်ပညာလေ့လာအကျိုးစီးပွားရှိပါတယ်။
မန်နေဂျာများကဏ္ဍ, သင်သိလား ဖရန့်လမ်းပတ် လက်တင်အနေဖြင့်တစ်ဦးဒီဂရီရှိပါတယ် ဗင်းဆင့် Kompany အဆိုပါမဟာမိတ်မန်ချက်စတာစီးပွားရေး School မှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်သခင်ဒီဂရီရှိသနည်း အမှန်စင်စစ်ဘောလုံးသမားများထောက်လှမ်းရေးများအတွက်ဂုဏ်သတင်းရှိသည်မဟုတ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်အပေါ်မှာဖော်ပြထားတဲ့ကစားသမားနှင့်မန်နေဂျာကျနော်တို့မှာအများကြီးသည့်ဇာတ်ကြောင်းပြောင်းလဲနေတဲ့ဆီသို့ဦးတည်လှူဒါန်းခဲ့ပါပြီ။
အခွက်နှင့်အတူဦးနှောက်။ LB. : LR Giorgio Chiellini, ဗင်းဆင့် Kompany, ဖရန့်လမ်းပတ်နှင့် Mata ကို, Image ကိုချေးငွေမထံမှ
အဘယ်ကြောင့်မရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - အချမ်းသာဆုံးကလပ်ပိုင်ရှင်များ
အင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အသင်းနဲ့ splash left ငွေသား, လက်ျာနှင့်စင်တာဝယ်ယူတဲ့သူဘီလျံနာတစ်ကစားကွင်းဖြစ်လာသည်။ အဖြစ်ဝေးဥရောပတစ်ဦးစိုးရိမ်ပူပန်မှုသည်အတိုင်း, အရေးအသား၏ထိုအချိန်ကအဖြစ်အချမ်းသာဆုံးကလပ်ပိုင်ရှင်ရှိတ် Monsour, က Man မြို့ဝယ်သောသူသည်။
တွေ့ဆုံရှိတ်အင်္ဂလန်အတွက်အချမ်းသာဆုံးကလပ်ပိုင်ရှင် Monsour- ။ ခရက်ဒစ်မှ ဂေါကလူကြီး & ငါnd
ဘေးဖယ်နေတဲ့ကလပ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ခြင်း, ရှိတ်ကိုလည်းအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၏ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်, သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမျက်မှောက်ရေးရာနှင့်အဘူဒါဘီ၏တော်ဝင်မိသားစု၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏ဝန်ကြီးသူသည်တစ်ဦးအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုမှတော်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူကယူအေအီး၏သမ္မတ, Khalifa bin ကို Zayed Al-Nahyan ၏ထက်ဝက်အစ်ကိုဖြစ်ပါတယ်။
ဘောလုံးကွင်းထဲမှာအချမ်းသာဆုံးယောသပ်သည်ကြွလာပြီးနောက် ဂျိုးလူးဝစ် စပါး၏ပိုင်ရှင်သူသည် non-လူကြိုက်များဗြိတိန်ဘီလျံနာ။
ဂျိုးလူးဝစ် (လက်ဝဲ), စပါး၏ပိုင်ရှင်ဗြိတိန်တွင်အချမ်းသာဆုံးလူတို့သညျတစျဦးဖွစျသညျ
ကိုယျတျောသငျသညျခွေးဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအားကစား Danial Levy ၏စကားကိုသင်တို့ကြားရပြီ, ဒါပေမယ့်ဂျိုးလူးဝစ်စပါးနောက်ကွယ်ကလူနှင့်ကလပ်ရဲ့ဥက္ကဌအဖြစ် Levy ခနျ့အပျထားသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖြစ်ပါသည် Roman Abramovich တို့, အဘယ်သူသည်အကောင်းဆုံးသူပွဲတစ်ပွဲဥရောပကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုပရီးမီးယားလိဂ်ဘက်မှချယ်လ်ဆီးအသွင်ပြောင်းသောသူသည်ချယ်လ်ဆီးအသင်းပိုင်ရှင်အဖြစ်ရုရှားကိုပြင်ပမှာလူသိများသည်။
အင်္ဂလန်နိုင်ငံနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနှစ်ခုလုံးကိုအများဆုံးချယ်လ်ဆီးပရိတ်သတ်တွေအဘို့, အဘေ ဒါကြောင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုကိုဝယ်ခြင်းငှါဖြစ်နိုင်သက်သေပြခဲ့သည်။
သမ္မာကျမ်းအမှန်တရားနေစစ်ဆေးခြင်း: ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘယ်ကြောင့်မရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ဖတ်နေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တွင် LifeBogger, ကျနော်တို့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်ကြိုးစားကြသည်။ သင်မှန်မကြည့်ဘူးသောအရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေပါလျှင်အောက်တွင်မှတ်ချက်ခွငျးအားဖွငျ့အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဝေမျှပါ။ ကျနော်တို့ကအမြဲသင့်ရဲ့အိုင်ဒီယာကိုတန်ဖိုးထားလေးစားပါလိမ့်မယ်။